Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ụlọ ọgwụ Thailand na-achọpụta ụdị mgbanwe Delta ọhụrụ ndị ọzọ
Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ọdịiche dị iche iche nke Delta ọhụrụ nke ụlọ ọgwụ Thailand chọpụtara - Site n'ikike nke Pattaya Mail
Hospitallọ ọgwụ Ramathibodi dị na Thailand achọpụtala ụdị ọhụrụ anọ dị iche iche nke ụdị Delta ọhụrụ nke coronavirus akwụkwọ akụkọ n'omume ụlọ ọgwụ nyochara.
Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkachamara achọpụtala ihe karịrị mmụba mmadụ iri isii nwere ike ime na mpaghara Delta.
N'ime ndị a, amaara mmadụ iri abụọ na abụọ na ọ bụ ha kpatara mpụta ụdị sub-variants ọhụrụ.
Ụdị Delta dị ihe dị ka pasent 60 karịa na-efe efe karịa nje SARS-CoV-2 mbụ ma nwee ike gbanahụ mgbochi site na ọrịa mbụ ihe dị ka ọkara oge.
Onye isi ụlọ ọgwụ Ramathibodi Center for Medical Genomics, Prọfesọ Dr. Wasun Chatratita, kwuru na achọpụtara sub-variants na nlele natara n'aka ọtụtụ ụlọ ọgwụ n'ofe Thailand.
O kwuru na achọtara sub-variant AY.4 (B.1.617.2.4) na 3% nke nlele sitere na Pathum Thani, ebe AY.6 (B.1.617.2.6) chọpụtara na 1% nke nlele sitere na mpaghara niile. obodo. Ka ọ dị ugbu a, achọtara sub-variants AY.10 (B.1.617.2.10) na AY.12 AY.12 (B.1.617.2.15) na 1% nke nlele sitere na Bangkok.
Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkachamara achọpụtala ihe karịrị mmụba mmadụ iri isii nwere ike ime na mpaghara Delta. N'ime ndị a, amaara mmadụ iri abụọ na abụọ na ọ bụ ha kpatara mpụta ụdị sub-variants ọhụrụ. Edebere mpaghara Delta nke mbụ, nke ekwenyesiri ike, AY.60 na AY.22, na Nepal.
Ndị na -eme nchọpụta na Mahadum Columbia University Mailman School of Public Health jiri igwe kọmpụta mee atụmatụ na Ụdị Delta dị ihe dị ka pasenti 60 ọzọ na -efe efe karịa nje SARS-CoV-2 mbụ ma nwee ike gbanahụ mgbochi site na ọrịa mbụ ihe dị ka ọkara oge. Tụnyere Delta, Beta na Gamma adịchaghị ebufe mana ha nwere ike ịgbanahụ mgbochi. E jiri ya tụnyere nje mbụ, Iota na -egbu ndị okenye.
Dr. Wan Yang, PhD, osote prọfesọ nke ọrịa na-efe efe na onye ndu akwụkwọ ọmụmụ ahụ kwuru, sị: “Ọdịiche ọhụrụ nke SARS-CoV-2 agbasawo ebe niile, mana ugbu a ọgwụ mgbochi ọrịa ka na-arụ ọrụ nke ọma igbochi ọrịa siri ike site na ọrịa ndị a, yabụ biko nweta gbaa ọgwụ mgbochi ma ọ bụrụ na ịmebeghị otu a.
“Ọ dị mkpa ka anyị na -eleba anya na mgbasa nke ụdị ndị a ka anyị wee nwee ike na -eduzi usoro mgbochi, mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi yana nyocha nke ịdị irè ọgwụ mgbochi ọrịa.
“Karịsịa, iji gbochie ntopute nke ụdị dị iche iche na njedebe oria ojoo COVID-19, anyị chọrọ mbọ zuru ụwa ọnụ ịgba ọgwụ mgbochi mmadụ niile gburugburu ụwa, wee gaa n'ihu na -eji usoro ahụike ọha ndị ọzọ ruo mgbe a ga -echebe oke zuru oke nke ndị mmadụ site na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. "